Faallooyinka lagu muujiyey midabada iyadoo loo eegayo heerka isticmaalaha laga soo galo Fromlinux | Laga soo bilaabo Linux
Faallooyinka lagu muujiyey midabada iyadoo loo eegayo heerka isticmaale ee ku jira Desdelinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Noticias, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waad ku mahadsan tahay waqtiga saaxiibkeen Hugo (oo aan rajaynayo inay dhowaan nala joogi doonaan iyagoo na siinaya aqoontooda), ayaa la saxay qayb ka mid ah koodhka mawduuca aan hadda ku isticmaalno <° Ka yimid Linux, si faallooyinka ay u muujiyaan midabbo kala duwan iyadoo loo eegayo heerka isticmaalaha uu ku leeyahay barta.
Hada faallooyinka waxaa loo arki karaa sida soo socota:
In kasta oo midabka midabku aanu dhammayn, faallooyinka ayaa lagu muujin doonaa sida soo socota:
Haddii faalluhu yahay abuuraha maqaalka: magenta highlighting.
Hadduu faalluhu maamule yahay: casaan bixin.
Haddii faallooyinka uu yahay tifaftire: iftiiminta jaallaha.
Haddii faallooyinka uu yahay qoraa: iftiiminta cagaaran.
Haddii faallooyinka uu yahay wax ku biiriyaha: buluug buluug ah.
Haddii faallooyinka ka mid yahay macmiil ama daawade (asal ahaan): muujinta ma jiro.
Maxay kula tahay 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Faallooyinka lagu muujiyey midabada iyadoo loo eegayo heerka isticmaale ee ku jira Desdelinux
50 faallooyin, ka tag taada
Miyaad nuugi lahayd sawir dabool kale? Eeg, si xun ayaad ugaga tagtay daboolkaas ...
Hahahaha! Geesinimo liidata! XD
Ka sokow in midabku gadaal yahay, qoraha boostadaas waa pandev92, aniga maahan
Waad saxantahay Geesi. Fikraddu waxay ahayd in qoraaga boostada oo kaliya uu ka muuqan doono cagaar, laakiin mawduuca uu balooggu adeegsanayo uma muuqdo inuu taageerayo isbeddelka shaxanka, marka hadda qorayaasha oo dhami waa cagaar. Waan arki doonaa haddii aan xal helo. (Oo waxaan ka raaligelinayaa qof walba wixii uu ka qoray Windows)
Waa lagaa cafiyay (?)
Casaan gabi ahaanba waan ka saari lahaa, maahan midab qurxoon faallo.
Waxba Hugo adiga ama dacwadan midna ... yaa had iyo jeer ka cabanaya HAHAHA !!!!
Kadib wuxuu la imaan doonaa xaqiiqda ah inuusan jecleyn cagaar, ama jaalle, ama haddii liinta ay xasuusiso Ubuntu ... LOL !!!
Aad baad ugu mahadsan tihiin tan, runtii ... waxaan rajaynaynaa inaan halkan idinku soo helno inta badan, waxaad haysataan wax badan (AAD U BADAN) oo aad ku darsataan inta aan leenahay.
Midabku wuu diiriyaa, waxa aan diideynin waa hooska, waxaan u maleynayaa inaad isku daydo mid waxyar ka fudud.
Kama cabanayo, waxaan ku tusi karaa cabaadkaaga oo aan ugu hayo emayl sawir
haha laakiin huruud ah waxba ma sheegaan oo waa maxay taasi?
Ku jawaab xgeriuz
jjajajajajajajaja ha lumin fursad aad ku siiso dadka saboolka ah geesinimada.
Wada-hawlgalayaashu waxay u muuqdaan jaalle, waa in laga bilaabo Linux uu ku shaqeeyo waqtiga dhabta ah, iyo in isbeddelkaas la sameeyay ka dib markii boostada la abuuray, hehe.
Ku jawaab rogertux
Ma arki karo midabadaas. Ma inaan halkan iska diiwaangeliyo?
Dhib malahan. Hore ayaan u arki karaa iyaga.
Ma arko iyaga
Iskuday inaad nadiifiso kaydka iyo buskudka
Haa way ahayd
Waa inay noqotaa inaad sugto css si aad u cusbooneysiiso ama wax.
Aniguna ma aanan arkin waxaanan u maleeyay inay iga tegayaan isticmaalka tiro yar iyo biraawsar dhacsan: P.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah inaan ka beddelo UserAgent waxayna umuuqataa inay shaqeynayso (laakiin maya, maahan sababta oo ah UserAgent).
hahahahaha fiiri inay haystaan ​​waqti firaaqo ah.
Waxaan ka cabsaday xoogaa inay madow ku ridaan xarfaha fudud ee mugdiga ah iyo fuchsia ee gawaarida hahahahaha
Hahaha ma ahan fikrad xun .. Geesinimo liidata !! In kasta oo madow isaga ku habboon yahay, birta iyo walaxda darteed ...
A sugnaansho Halkii laga siin lahaa midab kale markasta oo uu wax xun ka sheego Ubuntu iyo Uncle Mark, waa inay "summad" u muujiyaan "wax dhisid" iyo dhaliil qosol badan (! "# $% & / () = @) XD XD XD
Maaha wax shaqsi shaqsi ah, waad ogtahay inaan dhamaanteen ku jecel nahay wax yar troll 😉
Miirayaasha ayaa nimcooyinka ka qaada ololka hahaha
HAHAHA fikrad weyn ... markasta oo Geesinimada ay qortay "Winbuntu" waxay isu bedeshaa "ciqaabteyda la jeclaaday" ama wax la mid ah .... LOL !!!
Dhexdhexaadiyeyaashu waa inay beddelaan midabka maxaa yeelay taasi waa midabka asalka ah (ma caddaan), taas oo ah, tan dadka caadiga ah.
Cagaar wuxuu u egyahay "qurux" geesinnimo, hahahahaha.
Hoosku waxay noqon doontaa mid fudud ama aan lahayn hoos (kaliya qaab) si akhrisku u fududaado.
Waxaan hadda u soo diray elav nooc la beddelay halkaasoo qoraaga boostada uu leeyahay midab kale iyada oo aan loo eegin kaalintooda, marka waa in ay fududaan tahay in la garto. Sidoo kale isku day in tan la soo bandhigo iyadoon loo eegin inaad gasho iyo in kale, taas oo tan waa inaad u isticmaashaa isla cinwaanka emaylka ee aad haysato isticmaale ahaan.
Midabada way yara fududeyn karaan, in kastoo aan sameynayey tijaabooyin qaarkood hadday aad u iftiimiyaanna wey yara wareereen, taasi waa sababta aan ugu soo jeediyey heerkaas heerka cod-bixinta ah. Mana aha inay kuwani noqdaan midabada ugu dambeysa, milkiilayaasha baloogyada ayaa go'aan ka gaaraya inay badalayaan iyo in kale, waxaan kaliya ka caawiyay hirgalinta shaqeynta, maxaa yeelay waxaan arkay in elav uu xoogaa ku lumay taas. 😉
Dhab ahaan Way fiicantahay inay ogaadaan inta lagu jiro maalinta inay awoodaan inay ku arkaan waxyaabo yaab leh faallooyinka. Sababtoo ah foorida ay qiijiyeen, ama in biirku dhaawaceen isaga, waa sababta oo ah waxaan ku shaqeyneynaa kuleyl (Waqti Dheer) .. 😛
Waan jeclahay sida ay tahay, anigoo raadinaya eray si aan u qeexo aragtidayda, midka aan sida ugu fiican ku helay waa "yaqaan".
Miyaad markale badashay mise sigaar baan cabayaa?
Haa Ilaa Hugo ii soo diro sixitaanka cusub 😀
Wanaagsan, waxaan arkaa inaad horeyba u saxday sixitaankii ugu dambeeyay.
Hadda waxaan u baahanahay kaliya dhaliisha ... ahem ... jawaab celinta 😉
Horey waan usameeyay, midka hadhka leh, waxkale malahan, hadii kale waa hagaagsantahay
Dabcan, waa waxa uu haysto, ninka miskiinka ah durba wuxuu leeyahay sannadihii yaraa, inta udhaxeysa taas iyo reggaeton waa wax iska caadi ah inuu lumo
Hadaad kaliya ogaan laheyd .. anigu ma ihi kan ugu da'da weyn boggan .. ¬¬
Waan ogahay, laakiin taasi sanado kaaama qaadato
Markaas waxaan xaq u leeyahay faallooyinka imtixaanka! * _ *
Waxaan soo dhigayaa fiidiyoow! (waa aniga tababarka * _ *)
Lagu tifaftiray KdenLive! (in kastoo aan ahay tifaftire aad u xun) XDDDDDDD
Ka waran haddii faallooyinka uusan ka mid ahayn waxyaabaha aad sheegtay? O__0
Joogaa sidii had iyo jeer
Oo tan iyo markii aan halkan joogno, ma dhaawaceyso inaan ogaanno wax walba waxay yihiin, maxaa yeelay waxaa jira jagooyin ka badan kuwa xafiisyada dawladda, hahaha.
Waxa aan ula jeedo waa inay jiraan waxyaabo cad, sida abuuraha goobta, abuuraha mawduuca; laakiin qoraaga, tifaftiraha, wada shaqeynta, duugista, iwm, qofku si sax ah uma garanayo waxa ku saabsan. Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay ujeeddada midabbada ayaa ah in la garto waxyaabaha marka aan aragno, marka hore waa inaan ogaanno waxa waxyaalahaasi yihiin.
PS: Waxaan kujiraa sawirkaWaxaan ahay mid gaar ah!! XD.
Oops, waxaan khalday sawirka.
Taasina waa eedeymo maqan oo lagu daro:
- Gargaarka Nadiifinta Troll-ka (ALA): Waxay noqon doontaa qof mas'uul ka ah hubinta in Geesinimadu aysan nolol lahayn, tifaftirka shay kasta oo uu yiraahdo laguna beddelo wax macno leh. Booskan waxaa buuxin kara Qoraal Horumarineed oo Is-Kufilan (SAA).
- Khasaare Lahaansho Samurai (SOP): Waxay noqon doontaa qof mas'uul ka ah inuu ka bilaabo Katana hal mar oo ah faallooyinka macno darrada ah (sidan oo kale, inkasta oo aysan aniga aniga khusayn, maxaa yeelay markaa isagu lacag ma bixiyo)
- Ninkii Dilay Ninja: (waxba) Kan aan ugu jeclahay, waxay noqon doontaa mid naxariis daran oo aan u oggolaan doonin isticmaale kasta oo ay u aragto mid aan ku habboonayn goobta. Jagadan waa inuu buuxiyaa xubin SOPA ah, oo awood u leh xaddidaadda, faafreebka, mamnuucaya, jirdilka iyo ka-reebista isticmaaleyaasha, IP, ISP iyo ICANN lafteeda.
Marka waad arki doontaa sida tani u noqonayso qaansoroobaad ...
PS: Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan bilaabo inaan sameeyo wax soo saar leh .. uff
- Ninja Soul Killer: (WAXBA AAN AHAYN) Kan aan ugu jeclahay, wuxuu noqon doonaa mid naxariis daran oo uusan u oggolaan doonin isticmaale kasta oo uu u arko inuusan ku habboonayn goobta. Jagadan waa inuu buuxiyaa xubin SOPA ah, oo awood u leh xaddidaadda, faafreebka, mamnuucaya, jirdilka iyo ka-reebista isticmaaleyaasha, IP, ISP iyo ICANN lafteeda.
Laakiin waa inay sidan oo kale noqotaa ama ka yar: http://imageshack.us/photo/my-images/402/wallpaperschicaslindasa.png/
Timo la’aantaa, dabcan. Tan iyo markii aad dooratay, si wanaagsan ayaad u xulataa
Waan ku raacsanahay, waad beddeli kartaa timaha laakiin ma badali kartid boogaha.
Waan ku raacsanahay Pandev, casaanku xoogaa waa dagaal badan yahay, sax?
Jawaab ku bixi Lucas Matias
Hagaag, fikraddu waa si hufan taasi, taasi way taagan tahay.
Dhanka kale, uma maleynayo in gardarrada ay tahay wax walwal badan ku haya maamulayaasha qaar ee adeegsada cinwaanka BOFH ee golaha.
Mise waan qaldanahay, maamulayaasha? 😉
Ha! Sidoo kale waa run, in kastoo aan hubo in dad badani garanayn macnaha loo leeyahay BOFH 😀
HAHA gardarada cas? … Maya haba yaraatee, waxaan iska dhigi karnaa gebi ahaanba madow, wax ka beddeli karnaa CSS si mid kasta oo ka mid ah faallooyinkayagu uusan kaliya u badalin midabka, laakiin sidoo kale astaan, astaan, gif yar ayaa la dhigayaa hal gees oo ka mid ah (Ex: midig sare gees) ama wax ... iyo weli, ma noqon doonto mid dagaal badan ^ _ ^
Waad saxan tahay saaxiib, gardarradu maahan wax walwal nagu haya ... ugu yaraan si xad dhaaf ah uma badna, maxaa yeelay sida xaqiiqda ah waxaad dareentay in badan oo ka mid ah isticmaaleyaasheena / aqristayaasha isdaba jooga ah inay noqon karaan kuwo ka dagaal badan (trolls) ka badan nafteena hahahahaha.
Maxaa ku dhibaya waa fuchsiaas, waxaa loogu talagalay gabdhaha
Kaalay geesinimo, waxaad xidhantahay avatar gabar .. Maxaad u danaynaysaa midabka yar?
Horay ayaan uga sharaxay avatar, waa caado aan kusoo qaatay Dofu $ sida dad badan oo kale.
Waxaan daneynayaa midabka maxaa yeelay waa gabar waana toosanahay.
Ku hagaaji qallooca farta Intel 82945G / GZ iyo Kernel 3.x
Ubuntu TV: Linux ee TV-ga